Ngaba i-Spam ye-Russian Spam yingozi kakhulu kwihlabathi? - Impendulo ngo-Semalt
U-Julia Vashneva, uSemalt uMphathi oyiNtloko yeMpumelelo yoMthengi, uxhalabele ukuba i-spam yaseRussia okwangoku ibe yinkinga ebalulekileyo kwaye yenye yeyona ndlela ininzi kakhulu yogaxekile kwi-intanethi. Umxholo kunye namanqaku athunyelwe kwibhokisi lakho lebhokisi lokungeniswa kwiintengiso ezisisiseko kwiintsholongwane eziyingozi ezingakhubaza bonke abasebenzisi kunye ne-ISP amanethiwekhi kakhulu. Kwaye kukhuselekile ukuthetha ukuba oku kuya kuthatha ulwazi oluninzi olubalulekileyo, izixhobo kunye nexesha.
Njengamanye amazwe, iRashiya sele isandul 'amanyathelo athile ekuthintela ukuhlaselwa kwe-virus kunye nogaxekile. Nangona yonke loo migangatho, abasebenzisi emhlabeni wonke bafumana ii-imeyli ze-spam ezivela eRashiya. Ngaloo ndlela, sinokuthi ukuba akunakwenzeka ukucoca ii-imeyili ngokubanzi - site confiavel para comprar oculos ray ban. I-SpamCop.net iye yavula ezinye izicwangciso zokulimaza ii-ID ze-imeyile kwinani elikhulu labasebenzisi. Kutheni kungenakwenzeka ukuzilawula? Isizathu esibalulekileyo kukuba ukungabikho kwe-DNS kuhlu lwabantu abamnyama. Ayikho inkqubo ehleliweyo yokuthintela ugaxekile lwenethiwekhi, kwaye iifayile azikwazi ukucoca i-spam ye-spam ngaphandle ngenxa yamanyathelo angakhuselekanga okukhusela.
Umsunguli wogaxekile waseRussia:
I-Vardan Kushnir kuthiwa ilandele i-spam yaseRashiya. Wayeyinzululwazi eyaziwayo yeprojekthi eyayiza kuqhubeka kule nkalo ixesha elide. Ngelishwa, le ndoda ithatha indlela engafanelekanga kwaye izalise i-intanethi nge-spam ewonakalisayo neyingozi. Emva kokulwa urhulumente wakhe ngezizathu zezopolitiko, uKushnir wathatha enye indlela waza waqalisa ukusebenzisa isikhali sakhe - ugaxekile. Wasebenzisa ngokuhlakanipha izikhankaso ze-imeyile kwaye wathengisa izabelo zikaSophim..Into enye eyimise le ndoda engalunganga ekuphumeleleni kwakuseburhulumenteni baseKansas ababefuna ubungqina bentengiselwano eyenziweyo. Kwakhona, le ndoda ikholelwa ukuba iyasemva kwemisebenzi yogaxekile yaseRashiya eyayigxile kwiisongelo zezopolitiko nezentlalo.
Abanye abahlobo bakhe bathi uKunshir wayefuna ukuba ngumqhubi weeprosoft, onjengeBill Gates. Kodwa wakhetha indlela eyahlukileyo kwaye akaphumelelanga nayiphina impumelelo. I-antics yakhe yokuziqhayisa kunye ne-spam yamkhokelela ukuba asasaze uloyiko elizweni lakhe, okubangelwa ezininzi iingxaki kunye nokubulala.
I-Russian spam namhlanje:
Kunshir uye washiya ingqondo ehlala njalo kwi-spammers kule mihla. Imiyalezo eyahlukeneyo ye-spam yaseRashiya inokuthetha malunga nezicwangciso ezikhethekileyo kunye neendlela ezintsha. Abanye babo banikela ngemveliso kunye neenkonzo ngexabiso eliphantsi, ngelixa abanye babandakanyeka kwiirhweba eziphosakeleyo kunye nokugembula kwikhompyutha. Enye yeendlela eziphambili nezona zibalaseleyo zogaxekile yizo zipapasho zeeRolex zobuxoki.
Nangona abanye abasebenzisi bengazange bakuve ngako kuba imilayezo ayifumanayo ayikwazi ukuguqulelwa kwisiNgesi, abanye bakhathazeke ngekamva njengoko iibhokisi zabo zebhokisi zizaliswa ngama-email amaninzi. Nantsi indlela yokubamba loo ma-imeyile aqule iilwimi zangaphandle:
1. Unokwenza izixhumanisi ezahlukileyo ze-imeyile egcinwe.
2. Kufanele ususe ii-imeyile ezigqityiweyo, ezigcinwe okanye ezikhoyo kwiifolda.
3. Umele uyithumele kwifolda yedoti kwaye uyisuse ngokukhawuleza.
Ukuba ufumene amaninzi e-imeyile, unako ukunciphisa inani labo uze uthumele abanye kwifolda yogaxekile.